Ny maha-zava-dehibe ny Whitepaper Click | Martech Zone
Ny maha-zava-dehibe ny Whitepaper Click
Alatsinainy, Novambra 26, 2012 Alatsinainy, 8 Jona, 2015 Meen Boriboune
Delivra, mpanjifanay mailaka barotra mpanohana, dia namorona whitepaper mampiseho ny maha-zava-dehibe ny tsindry satria mety ho ny mahasamihafa ny fanaovana ny varotra.
Ny maha-zava-dehibe ny kitika iray whitepaper dia miresaka momba ny antony ao ambadiky ny tsindry tsirairay, ny tetika hanatsarana ny tahan'ny tsindry, ary ny fiainana ny fiainana tena izy mba hampahafantarana fa ny fahatakarana ny maha-zava-dehibe ny tsindry iray dia hanampy ny ezaky ny varotra mailaka ataon'ny orinasanao.
Ny fiakaran'ny tahan'ny fipihana eo amin'ny marketing amin'ny mailakao dia vokatry ny paikady marketing mailaka samihafa natambatra. Tokony ho fantatrao ny mpihaino anao, omeo zavatra mendrika tsindry iray izy ireo, ary hamorona mailaka nateraka nisesisesy mba hahitana ny fitambarana mety indrindra amin'ny orinasanao.
Ampidino ny whitepaper raha mila fampahalalana tsara momba ny fanatsarana ny tahan'ny tsindry amin'ny alàlan'ny mailakao!
Ampidino ny White Paper!
Tags: tsindrio nydelivramailaka MarketingNy maha-zava-dehibe ny tsindry irayloharanoWhitepaper
Meen dia mpianatra mpikaroka momba ny Butler Marketing miaraka amin'ny ekipa ao DK New Media. Ny andraikitr'i Meen dia misy ny fikarohana sy ny famokarana atiny ho an'ny mpanjifany, eo ambany fitarihan'ny Len Lisak.
Dingana voalohany amin'ny asa sosialy: fahitana
Fomba 10 hanovana ireo mpitsidika mampiasa Psychology